Iko kukosha kweApple Music kwakatenderedza mabhiriyoni gumi emadhora | Ndinobva mac
Mumakore asingasviki maviri, Apple inomhanyisa mimhanzi sevhisi yakwanisa kuwana mamirioni makumi matatu nevatanhatu, vese vachibhadhara uye parizvino ine huwandu hunofungidzirwa hwemabhiriyoni gumi emadhora, iyo yakaenzana ne1% yehuwandu hweApple mumusika, sekureva kwemuongorori weBerstein, Toni Sacconahi.
Sekureva kwemuongorori uyu, chikamu cheApple Music kukosha kukosha, yakaiwana kuburikidza nedatha yekukoshesa yemukwikwidzi wayo wepamusoro mumusika Spotify, iyo parizvino ine vanopfuura mamirioni makumi manomwe vanyoreri vanobhadhara, uye vamwe mamirioni makumi manomwe vashandisi veiyo yemahara vhezheni ine ma ads.
Mumushumo mumwe chete, Toni akataura izvozvo bhizinesi rekurodha mumhanzi kuburikidza iTunes rave kudzikira, sezvo vashoma uye vashoma vashandisi vanofarira kutenga nziyo kana maalbubuni pachavo Uku kurasikirwa kwemari kunowanikwa nekuderera kwekutengesa mumadhijitari fomati hakugone kugadziriswa neApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi.
Kubva 2014, iyo mari inogadzirwa neApple chitoro chemimhanzi yakadzikiswa ne50%. Toni anosimbisa kuti kukura kweApple yekushambadzira mimhanzi sevhisi inosvika 70% mukati megore rino, uye 50% mukati megore rinotevera, ichiwedzera muzana yemari iyo ikozvino inogadzira mari yeApple dzimba dzese.
Jimmy Iovine, anotungamira zvirongwa zvemimhanzi zveApple muindastiri yemimhanzi, anoti Apple Music, Spotify uye mamwe masevhisi emimhanzi anotenderera haaburitse mari yakakwana kuti varambe vachizvigadzirira, nekuda kwemitero yepamusoro yemitero yavanofanira kubhadhara kune vanopa. Kuti kudzikise iyi muzana, vese Apple neSpotify vasvika pazvibvumirano zvakasiyana neyemimhanzi majors kudzikisa muzana yavanobhadhara kune vanogovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iko kukosha kweApple Music kwakatenderedza mabhiriyoni gumi emadhora